Iindaba-Isikhokelo esigqibeleleyo sokulinganiswa kwe-IP engenamanzi-IP44, IP54, IP55, IP65, IP66, IPX4, IPX5, IPX7
Isikhokelo esigqibeleleyo sokulinganiswa kwe-IP engenaManzi-IP44, IP54, IP55, IP65, IP66, IPX4, IPX5, IPX7
Unokudibana neemveliso ezinophawu kuzo okanye kwiipakeji zazo, njenge-IP44, IP54, IP55 okanye ezinye ezifanayo. Kodwa uyazi ukuba zithetha ntoni ezi zinto? Ewe, le yikhowudi yamazwe aphesheya emele inqanaba lokukhuselwa kwemveliso ngokuchasene nokungena kwezinto eziqinileyo kunye nolwelo. Kule nqaku siza kuchaza ukuba kuthetha ukuthini i-IP, ungayifunda njani le khowudi kwaye uchaze ngokweenkcukacha amanqanaba okhuseleko ahlukeneyo.
Umhloli wereyithi ye-IP Ngaba ufuna ukwazi ukuba ithini inqanaba le-IP kwimveliso yakho? Sebenzisa oku kujongwa kwaye iya kubonisa inqanaba lokhuseleko.
Imveliso enexabiso le-IP00 ayikhuselwanga kwizinto eziqinileyo kwaye ayikhuselwanga kulwelo.
Ithetha ntoni i-IP Rating? Ukulinganiswa kwe-IP kuthetha ukulinganiswa kokuKhuselwa kwe-Ingress (ekwabizwa ngokuba nguMakethi wokuKhuselwa kwaMazwe ngaMazwe) emele ikhowudi ekufuneka umenzi ayichaze ukuze umthengi azi ukuba imveliso ikhuselekile na ekungenelweni kweengqokelela zelizwe eliqinileyo okanye amasuntswana olwelo. Ukulinganiswa kwamanani kunceda abantu ukuba bazikhathalele ngcono iimveliso abazithengayo kunye nokwazi ukuzigcina zikwimeko ezifanelekileyo. Uninzi lwabavelisi be-elektroniki bachaza iinkcukacha ezintsonkothileyo ezinxulumene neemveliso zabo, kodwa ireyithingi ye-IP iya kuba lula ukuyiqonda ukuba abantu bayaziswa ngayo. Ikhowudi ye-IP sisixhobo esivulekileyo esinokunceda nabani na ukuba athenge iimveliso ezikumgangatho ongcono, ngaphandle kokulahlekiswa yingxoxo kunye nokucaciswa okungacacanga. Ukukhuselwa kwe-Ingress yinqanaba eliqhelekileyo elamkelwa kwihlabathi liphela elinokuthi lisetyenziswe nangubani na, nokuba ithini na. Le migangatho ye-electrotechnology yenzelwe ukwazisa abantu ukuba yeyiphi into enokubekwa kuyo imveliso, ukusuka emanzini ukuya kukhuseleko lwento eqinileyo. Ikhowudi ijongeka ngoluhlobo: ingxelo emfutshane yoKhuselo lwe-Ingress, eyi-IP, elandelwa ngamanani amabini okanye ileta X. Idigital yokuqala ibonisa ukumelana kwento ngokuchasene nezinto eziqinileyo, ngelixa yesibini ibonisa ukhuselo olunikezelwa kulwelo. Ileta X ibonisa ukuba imveliso ayivavanyelwanga udidi (nokuba ziqinile okanye ulwelo). Ukukhuselwa kwento eqinileyo Ukukhuselwa kwemveliso ye-elektroniki ngokuchasene nezinto zikarhulumente oqinileyo kubhekisa kukufikeleleka kwezinto eziyingozi ngaphakathi kwimveliso. Inqanaba lisuka ku-0 liye ku-6, apho i-0 lithetha ukuba akukho khuseleko konke konke. Ukuba imveliso inezinto ezikhuselekileyo zokukhusela i-1 ukuya kwi-4, ikhuselwe kwizinto ezingaphezulu kwe-1mm, ukusuka ezandleni neminwe ukuya kwizixhobo ezincinci okanye iingcingo. Olona khuseleko lunconywayo ngumgangatho we-IP3X. Ukukhuselwa kumasuntswana othuli, imveliso kufuneka ibonise ubuncinci bomgangatho we-IP5X. Ukungena kothuli ngoyena nobangela womonakalo ngokwe-elektroniki, ke ukuba imveliso iyenzelwe ukuba isetyenziswe kwiindawo ezinothuli, i-IP6X, elona khuseleko liphezulu liqinisekisiweyo, kufanele ukuba ibe kukudibanisa. Oku kukwabizwa ngokuba kukukhusela ukungena ngaphakathi. Kubaluleke kakhulu ukukhetha eyona Ireyithingi ye-IP efanelekileyo kwimveliso ye-elektroniki, kuba oku kunefuthe ekuchaseni kwemveliso kunxibelelwano lombane ohlawulisiweyo, oko kunokukhokelela ekonakaleni kwemveliso ngexesha. Izinto ze-elektroniki ezigutyungelwe ziifilimu ezincinci zepolymeric ziyamelana neemeko zokusingqongileyo ezinothuli ixesha elide.
0 -Akukho khuseleko luqinisekileyo
1 - Ukhuseleko luqinisekiswe kwizinto eziqinileyo ezingaphezulu kwama-50mm (umz. Izandla).
2 - Ukhuseleko luqinisekiswe kwizinto eziqinileyo ezingaphezulu kwe-12.5mm (umz. Iminwe).
3 - Ukhuseleko luqinisekiswe kwizinto eziqinileyo ezingaphezulu kwe-2.5mm (umz. Iingcingo).
4 - Ukhuseleko luqinisekiswe kwizinto eziqinileyo ezingaphezulu kwe-1mm (umz. Izixhobo kunye neengcingo ezincinci).
5 -Khuselwe ngokuchasene nobungakanani bothuli obunokuphazamisa ukusebenza kwesiqhelo kwemveliso kodwa kungabikho ngothuli ngokupheleleyo. Gcwalisa ukhuseleko kwizinto eziqinileyo.
6 -Uluthuli ngokuqinileyo kwaye lukhuselekile ngokupheleleyo kwizinto eziqinileyo.
Ulwelo Ingress Protection Kuyafana nakulwelo. Ukhuselo lwe-Liquids Ingress lukwaziwa njengokukhuseleka kokufuma kwaye amaxabiso anokufumaneka phakathi kwe-0 kunye ne-8. Njengakwimeko ekhankanywe apha ngasentla, u-0 uthetha ukuba imveliso ayikhuselwanga nangayiphi na indlela ekungeneni kwamasuntswana olwelo ngaphakathi kwetyala. Iimveliso ezingangenwa ngamanzi azinakuxhathisa xa zibekwa phantsi kwamanzi ixesha elide. Ukuvezwa kwemali encinci yamanzi yanele ukonakalisa imveliso ngexabiso eliphantsi le-IP. Usenokudibana neemveliso ezinamanqanaba afana ne-IPX4, IPX5 okanye i-IPX7. Njengoko bekutshiwo ngaphambili, inamba yokuqala ibonisa ukhuseleko lwento eqinileyo kodwa amaxesha amaninzi abavelisi abazivavanyi iimveliso zabo zokungena kuthuli. Kungenxa yoko le nto inamba yokuqala ithathelwe indawo ngu-X. Kodwa oko akuthethi ukuba imveliso ayikhuselwanga eluthulini. Ukuba inokhuseleko olufanelekileyo ngokuchasene namanzi kunokwenzeka ukuba ikhuselwe nothuli ngokunjalo. Okokugqibela, ixabiso le-9K libhekisa kwiimveliso ezinokucocwa kusetyenziswa umphunga kunye nokuxhasa iziphumo zejets zamanzi zoxinzelelo oluphezulu, nokuba zivela kweliphi icala. Njengoko bekutshiwo ngaphambili, kwimveliso edweliswe njenge-IPXX, akukho vavanyo lwenziwayo ukuze kufunyaniswe ukuba ngaba iimveliso zinokuthintela amanzi nothuli okanye akunjalo. Kubalulekile ukuba uqonde ukuba ukulinganiswa kwe-XX akuthethi ukuba imveliso ayikhuselwanga kwaphela. Ukunxibelelana nomenzi kunye nokusoloko ufunda isikhokelo somsebenzisi kunyanzelekile ngaphambi kokubeka isixhobo se-elektroniki kwiimeko ezizodwa.
0 -Akukho khuseleko luqinisekileyo.
1 - Ukhuseleko luqinisekisiwe ngokuchasene namathontsi amanzi athe nkqo.
2 -Ukhuselo luqinisekisiwe ngokuchasene namanzi athe nkqo xa imveliso ithambekile yaya kutsho kwi-15 ° kwindawo yayo yesiqhelo.
3 -Ukhuseleko luqinisekisiwe ngokuchasene ngqo nezitshizi zamanzi kuyo nayiphi na i-engile ukuya kuma-60 °.
4 - Ukhuseleko luqinisekiswe ngokuchasana namanzi kuyo nayiphi na ikona.
5 -Ukukhuselwa kuqinisekisiwe ngokuchasene neejets zamanzi eziqikelelwe ngumlomo (6.3mm) kuyo nayiphi na i-engile.
6 -Ukhuselo luqinisekisiwe ngokuchasene nejets zamanzi ezinamandla eziqikelelweyo ngombhobho (12.5mm) kuyo nayiphi na i-engile
7 - Ukhuseleko luqinisekisiwe ekuntywilisweni emanzini kubunzulu obuphakathi kwe-15 cm kunye ne-1 yemitha ubuninzi bemizuzu engama-30.
8 Ukhuseleko luqinisekisiwe ngokuchasene nexesha elide lokuntywiliselwa emanzini kubunzulu obungaphezulu kwe-1 yemitha.
9K -Ukhuselo luqinisekisiwe ngokuchasene neziphumo zejets zamanzi zoxinzelelo oluphezulu kunye nokucoca umphunga.
Iintsingiselo ezithile zeMilinganiselo ye-IP
IP44 —— Imveliso enexabiso le-IP44 kuthetha ukuba ikhuselwe kwizinto eziqinileyo ezinkulu kune-1mm kunye namanzi atshiza avela macala onke.
IP54 —— Imveliso enexabiso le-IP54 ikhuselwe kuthuli olungene ngokwaneleyo ukukhusela imveliso ekusebenzeni ngokwesiqhelo kodwa ayilothuli oluqinileyo. Imveliso ikhuselwe ngokupheleleyo ngokuchasene nezinto eziqinileyo kunye nokutshiza amanzi kuyo nayiphi na i-engile.
IP55 —— Imveliso elinganisiweyo ye-IP55 ikhuselekile ekungeneni kothuli okunokuba yingozi ekusebenzeni kwesiqhelo kwemveliso kodwa kungabi luthuli ngokupheleleyo. Ikhuselekile kwizinto eziqinileyo kunye neejets zamanzi eziqikelelwe ngombhobho (6.3mm) kuyo nayiphi na indlela.
IP65 —— Ukuba ubona i-IP65 ibhaliwe kwimveliso, oku kuthetha ukuba uthuli luqinile kwaye lukhuselekile kwizinto eziqinileyo. Kwaye ikhuselekile kwiijets zamanzi eziqikelelwe ngumlomo (6.3mm) kuyo nayiphi na i-engile.
IP66 —— Ukulinganiswa kwe-IP66 kuthetha ukuba imveliso ikhuselwe ngokupheleleyo eluthulini nakwizinto eziqinileyo. Ngapha koko, imveliso ikhuselwe kwiijets zamanzi ezinamandla eziqikelelwe ngombhobho (12.5mm) kuyo nayiphi na indlela.
IPX4 —— Imveliso elinganisiweyo ye-IPX4 ikhuselwe kukuchaphazeleka kwamanzi kuyo nayiphi na ikona.
IPX5 —— Imveliso enexabiso le-IPX5 ikhuselwe kwiijets zamanzi eziqikelelwe ngombhobho (6.3mm) kuyo nayiphi na indlela.
IPX7 —— Ukulinganiswa kwe-IPX7 kuthetha ukuba imveliso inokuntywiliselwa emanzini ubuninzi bemizuzu engama-30 kubunzulu obuphakathi kwe-15cm ukuya kwi-1m.